> Resource> Jailbreak> Esi jailbreak iPhone 5S
Na bụla mmegolite, Apple eweta elu ọhụrụ oké atụmatụ ya ekwentị edoghi. Abụọ nke majors 'tinye-na na na iPhone 5S bụ Touch ID mkpisiaka ude na iOS 7. Ọ bụ ezie na ndị niile jụụ ọhụrụ atụmatụ, na iPhone 5S ka oyokop ejedebeghị. Ekele na Evad3rs otu, ị nwere ike untethered jailbreak gị iPhone 5S.
Jailbreaking iPhone 5S iji evasi0n 7 bụ nnọọ ogologo n'ihu, mfe na ike. Ma ka ọ bụla jailbreaking mkpachapụ ma ọ bụ iOS mmelite, ya na-atụ aro, ọ dịghị ikwu a chọrọ na ị ndabere gị iPhone 5S data nnọọ bụrụ na nke ihe ndabara na ihe na-ezighị ezi na-eme.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla ihe ọjọọ eme, ị nwere ike iweghachi gị iPhone 5S na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ thru iTunes, iCloud ma ọ bụ i nwere ike iji Wondershare Dr.Fone maka iOS naghachi gị furu efu data gị iPhone 5S ma ọ bụ site na nkwado ndabere faịlụ.
Ọ bụrụ na ị dịghị mgbe jailbroken ihe iPhone tupu, karịa nke a nkuzi bụ maka gị. Anyị ga-ekpuchi niile nzọụkwụ ke mfe ụzọ kwere omume jailbreak ihe iPhone 5S n'okpuru iOS 7 iji evasi0n 7. Anyị na-aga na-eji mac version nke evasi0n 7, windo version ike ọ gaghị anya kpọmkwem otu, ma ọ bụ yiri nnọọ , otú ị ga-enweghị nsogbu ọ bụla na-esonụ a nkuzi na iji windows version.
Lee ndị nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro:
Nzọụkwụ 1: Wepụ passcode si gị iPhone 5S ma ọ bụrụ na e nwere otu
Nzọụkwụ 2: Download Evasi0n 7 (mac version)
Nzọụkwụ 3: Chọpụta Evasi0n 7 faịlụ na-emeghe ya
Nzọụkwụ 4: Jikọọ iPhone 5S gị Mac
Nzọụkwụ 5: Pịa na "Jailbreak" button ẹkedori usoro
Nzọụkwụ 6: Ị kpọghee ekwt gị iPhone 5S na pịa na evasi0n 7 ngwa
Nzọụkwụ 7: ịgbanyụ na Jailbreak mere
Nzọụkwụ 8: Ịtọlite ​​Cydia
Biko gbanyụọ passcode na gị iPhone 5S bụrụ na i nwere otu. Iji mee otú ahụ, Site na Ihuenyo na gị iPhone 5S, enweta na Ntọala General passcode mkpọchi On Tụgharịa passcode Off, mgbe ahụ, Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa.
Ị nwere ike ịchọta evasi0n 7 software na adreesị a evasion7.com. Kpachara anya ibudata mgbazi version maka kọmputa gị.
Mgbe gị download bụ n'isi, maka Mac version, abụọ click na evasi0n7.dmg na ikpuru na dobe evasi0n 7app n'ebe ọ bụla na gị mac (atụ: desktọọpụ). Ẹkedori ngwa, abụọ click na evasi0n 7 ngwa.
Jikọọ gị iPhone 5S gị mac na eriri / ọkụ USB na e nyere na ekwentị.
Evasi0n 7 ga-chọpụta gị iPhone 5S na ga-ekwu banyere ndị iOS femụwe version na-agba ọsọ. Pịa na jailbreak bọtịnụ iji malite usoro.
Ozugbo usoro zuru ezu, ị ga-enweta a ozi na-agwa gị Ị kpọghee ekwt gị iPhone. Biko Ị kpọghee ekwt gị iPhone 5S na pịa na evasi0n 7 ngwa. Ọzọkwa, adịghị mechie evasi0n 7 software na kọmputa gị, dị ka Jailbreaking usoro bụ ma rụchaa.
The iPhone ihuenyo ga-aga nwa na mgbe ahụ, ọ ga-reboot site n'onwe ya, atụla-echegbu onwe dị ka nke a nkịtị. Ozugbo iPhone ka reboot, ị ga-ahụ cydia ngwa na ekwentị gị, ọma jailbroken gị iPhone 5S.
Iji Mbido Cydia, dị nnọọ pịa na ngwa ozugbo na ọ ga-akpaghị aka initialize onwe ya. Na mbụ igba egbe, ngwa ga-reboot gị iPhone 5S mgbe mwube elu. Mgbe ịgbanyụ, dị nnọọ enweta ọzọ na cydia ngwa ibudata oké ngwa ọdịnala na ị gaghị na-ahụ Apple ngwa ahịa.